Review/Unboxing – Myanmar Mobile App
ကီးဘုတ်မှာပါ Screen ပါတဲ့ Zenbook Pro Duo Laptop ကိုမိတ်ဆက်ပြသ
ကီးဘုတ်နေရာမှာပါ 4K Touch Screen ပါတဲ့ Laptop မော်ဒယ်အသစ်အဆန်း ၁ မျိုးကို Asus ကနေဒီနေ့ ထိုင်ဝမ်မှာကျင်းပတဲ့ Asus နှစ် ၃၀ ပြည့်ပွဲမှာမိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ ဒီမော်ဒယ်အသစ်ကိုတော့ Zenbook Pro Duo လို့ခေါ်ပါတယ်။ Screen အနေနဲ့ ၁၅ လက်မ Touch Screen Monitor အကြီးတစ်ချပ် ၊ ကီးဘုတ်နေရာအပေါ်ပိုင်းမှာ ၁၄ လက်မအရွယ် Touch Screen Display တစ်ခုထည့်ပေးထားပါတယ်။ မိုက်တဲ့အချက်ကတော့ အပေါ် Display ကလည်း 4K ၊ အောက်က Screen Pad ကလည်း 4K ပါပဲ။ ဒီ Laptop ရဲ့ Main Screen အနေနဲ့ […]
Posted on May 27, 2019 May 27, 2019 Author myanmarmobileapp	Comment(0)
TECNO SPARK3Pro နဲ့Vivo Y91 နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ချက်
ဒီဖုန်း၂မျိုးလုံးမှာ Display size ကတော့အတူတူလောက်ပါပဲ။ ။ TECNO SPARK3Pro ရဲ့ Screen size ကို 6.2 လက်မအရွယ် Full View Display ကိုတပ်ဆင်ထားပါတယ်။ ဖုန်းရဲ့Display ထိပ်မှာ Notch ပါဝင်ပါတယ်။ Vivo Y91 မှာတော့ Screen size 6.22 လက်မအရွယ် Full view display တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ ဖုန်းရဲ့Display ထိပ်မှာNotch ပါဝင်ပေမယ့် TECNO SPARK3Pro Display ရဲ့Notch ထက် နေရာယူမှု ပိုနည်းပါးတဲ့ Waterdrop design နဲ့ notch ပုံစံကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ ဖုန်း၂မျိုးလုံးရဲ့ Screen Resolution […]
Posted on May 14, 2019 May 27, 2019 Author myanmarmobileapp	Comment(0)
Galaxy S10 Plus ceramic vs. glass ဘယ်ဖုန်းက drop test ခံနိုင်မလဲ
Ceramic မော်ဒယ်လ်က ဒေါ်လာ၂၅၀ အပိုပေးဖို့ ထိုက်တန်ရဲ့လား။ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ drop test ကို စမ်းသပ်ထားပါတယ်။ Samsung Galaxy S10 Plus ဟာ အရင်မော်ဒယ်လ်တွေလို အကွေးတွေ၊ အလူမီနီယမ်ဖရိန်တွေက အတူတူပါပဲ။ ကြည့်ပျော်ရှုပျော်ရှိတဲ့ ပေါင်းစပ်မှုတွေဖြစ်တာမို့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ drop test ကိုတော့ ခံနိုင်လောက်မယ်အထင်ပါဘူး။ Galaxy S8 နဲ့ S9 တို့ရဲ့ အနောက်ဘက်ဖန်သားပြင်ကတော့ ပထမဆုံး drop level မှာတင် ကွဲခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ S10 Plus ရဲ့အရှေ့မှာ Gorilla Glass6ကို အသုံးပြုထားပြီးတော့ အနောက်ဘက်မှာ Gorilla Glass5ဒါမှမဟုတ် ceramic ကို သင့်ရွေးချယ်မှုအရ […]
Posted on March 17, 2019 March 17, 2019 Author Aung Phyo Oo (Myanmar Mobile App)	Comment(0)
မြန်မာပြည်ဈေးကွက်သို့ဝင်ရောက်လာတော့မည့် Huawei Nova 4
ဖုန်း Screen အတွင်းထဲမှာပဲအပေါက်ပုံစံလေးလုပ်ပြီး Selfie Camera ထည့်သွင်းပေးထားတဲ့ Punch Screen နည်းပညာသစ်နဲ့စမတ်ဖုန်း ၁ မျိုးဟာ မကြာခင်မှာ မြန်မာပြည်ဈေးကွက်ထဲကိုဝင်ရောက်လာတော့မှာပါ။ ဒီ Display နည်းပညာသစ်ကြောင့် iPhone X မှာပြုလုပ်ခဲ့သလို ဖုန်းရဲ့ထိပ်မှာ Notch ပုံစံ (ထိပ်အချိုင့်ပုံစံ) နဲ့ Camera/Sensor နေရာတွေကို ဝိုက်ထားစရာမလိုတော့သလို ၊ Vivo Nex ,Oppo Find X နဲ့ Mi Mix3တွေမှာလို Selfie Camera ကိုဖုန်းကိုယ်ထည်အတွင်းထဲထည့်မြုပ်ထားပြီး လိုတဲ့အချိန်မှ Motorized စနစ်နဲ့ (သို့) Manual Slide နဲ့ဖုန်းကိုယ်ထည်အပေါ်ကိုကင်မရာထုတ်ရတဲ့ Solution မျိုးလည်းမလိုအပ်တော့ပါဘူး ။ **Huawei ရဲ့ Nova 4** […]
Posted on January 28, 2019 January 29, 2019 Author myanmarmobileapp	Comment(0)
Knowledge Smartphone Trending
iPhone XS နဲ့ Huawei P20 Pro ကင်မရာပိုင်း ဘယ်သူပိုသာသလဲ ?
Apple ရဲ့ စမတ်ဖုန်းသစ်တွေ ဖြစ်တဲ့ iPhone XS နဲ့ iPhone XS Max တွေဟာ အခုဆိုရင် ဈေးကွက်ထဲမှာ တရားဝင်ရောင်းချနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ စမတ်ဖုန်းသစ်တွေမှာ Bionic A12 နဲ့အတူ dual card dual standby လို hardware ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ချက်တွေ ထည့်သွင်းလာပါတယ်။ ကင်မရာပိုင်းမှာလည်း ပိုကောင်းတဲ့ စွမ်းဆောင်ချက်တွေ ပါဝင်လာတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကင်မရာပိုင်းမှာ ထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ Huawei P20 Pro နဲ့ XS တို့ကို နှိုင်းယှဉ် ပေးသွားမှာပါ။ ကင်မရာပိုင်းအနေနဲ့ iPhone XS မှာ 12MP wide-angle + telephoto dual-lens ကိုတပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ Huawei P20 […]
Posted on September 23, 2018 September 23, 2018 Author jacksonsoemoe	Comment(0)
Huawei Nova3စမတ်ဖုန်းရဲ့အနေအထားကဘယ်လိုလဲ ?
Huawei ရဲ့အသစ်ထွက် Nova3ဖုန်းကိုတော်တော်လေးကြိုက်မိတယ်။ ကြိုက်မိတယ်ဆိုတာထက် အံ့သြဖို့ကောင်းတယ်လို့ပြောရင် ပိုမှန်မှာပါ။ ဘာကြောင့်လဲ ? ပထမဆုံးအံ့သြမိတာက Huawei ကသူ့ရဲ့၁၁ သိန်းတန် P20 Pro လို Flagship ဖုန်းမှာသုံးထားတဲ့ Kirin 970 လို အဆင့်မြင့် Processor ကို သူ့ရဲ့အသစ်ထွက် ငါးသိန်းကျော်တန် Nova3စမတ်ဖုန်းမှာ အသုံးပြုပေးလိုက်လို့ပါ။ RAM အနေနဲ့ 6GB ပါဝင်ပါတယ်။ Kirin 970 Processor ဟာ Overall performance အားဖြင့် Snapdragon 835/845 processor ကိုယှဉ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ Machine learning နဲ့ AI ပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာတော့ Kirin 970 ဟာ အဆိုပါ […]
Posted on August 31, 2018 Author myanmarmobileapp	Comment(0)
Sony ရဲ့ PlayStation4Pro 500m limited Edition လေးကို unboxing လုပ်ရအောင်
Zawgyi Version ဘူးထဲမှာတော့ console, controller, DMI cable, USB cable, power cord, wired earbud, PlayStation camera, holder, vertical stand လေးပါဝင်ပါတယ်။ Unicode Version ဘူးထဲမှာတော့ console, controller, DMI cable, USB cable, power cord, wired earbud, PlayStation camera, holder, vertical stand လေးပါဝင်ပါတယ်။
Posted on August 19, 2018 August 19, 2018 Author Aung Phyo Oo (Myanmar Mobile App)	Comment(0)
Samsung Galaxy Note9ကို အကြိုသုံးသပ်ကြည့်ခြင်း
Note9ကတော့ upgrade သေးသေးလေးတွေအများကြီးနဲ့ အလန်းစားဖြစ်နေပါတယ်။ ကနဦးသုံးသပ်ချက် အရင် Note ဖုန်းတွေထက် ကြီးမားပြီးတော့ Note9မှာ ကျယ်ပြန့်တဲ့မျက်နှာပြင်၊ ကြီးမားတောင့်တင်းတဲ့ ဘတ်ထရီ၊ အရမ်းမိုက်တဲ့ 1TB storage တို့ပါဝင်နေပါတယ်။ ကင်မရာလေးဟာ ပိုကောင်းလာပြီးတော့ Bluetooth နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ S Pen လေးဟာ customizable shortcut လေးတွေကို အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း ဈေးနှုန်းကတော့ iPhone X နဲ့ညီနေတဲ့အနေအထားပါ။ အကြိုက်များ လှပနေတဲ့ ၆.၄လက်မ Infinity Display ဘတ်ထရီကြီးကြီးနဲ့ သိုလှောင်မှုပမာဏများများ ကင်မရာတိုးတက်ကောင်းမွန်လာမှုများ Bluetooth S Pen shortcut မကြိုက်တာတွေကတော့ ဈေးကြီးတယ် upgrade အသေးလေးတွေ အများကြီးထည့်သွင်းထား HDR […]
Posted on August 12, 2018 Author Aung Phyo Oo (Myanmar Mobile App)	Comment(0)
Enterprise Knowledge Smartphone Smartphone Trending
Galaxy unpacked 2018 မှာဘာတွေမိတ်ဆက်လာမလဲ ?
ကိုရီးယား စမတ်ဖုန်း ထုတ်လုပ်သူ Samsung အနေနဲ့ သြဂုတ်လ ၉ရက်နေ့ နယူးယောက်မှာ ပြုလုပ်မယ့် Galaxy unpacked 2018 ပွဲမှာ Galaxy Note9၊ Galaxy Watch တို့နဲ့အတူ Wireless Charger Duo ကိုပါပွဲထုတ်မိတ်ဆက်လာနိုင် ခြေရှိပါတယ်။ ထုတ်ကုန်သစ်တွေမှာ ဘယ်လိုစွမ်းဆောင်ချက် တွေပါမလဲ Galaxy Note9သူ့မှာ screen ကို 6.3 inches မှာ Super AMOLED 2K display နည်းပညာသုံးလာမှာဖြစ်ပြီး 18.5:9အချိုးနဲ့ဖြစ်မှာပါ။ ဒါ့အပြင် Samsung အနေနဲ့ ဘက်ထရီစွမ်းအားပိုင်းမှာ 4000mAh ကိုသုံးလာမှာဖြစ်ပြီး S Pen ဟာ Bluetooth-controller […]
Posted on July 29, 2018 July 29, 2018 Author jacksonsoemoe	Comment(0)
Porsche Design Huawei Mate RS ဟာ ပရီမီယမ်ဆန်ရဲ့လား
အားသာချက် ကင်မရာအလန်းစား မြန်ဆန်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်များ မြန်ဆန်တဲ့ Facial Recognition Notch ကင်းစင်ပြုံးပျော်ရွှင် IP 67ရေစိုခံ အားနည်းချက် မျက်နှာပြင်အောက် scanner သိပ်မမိုက် ဈေးအလွန်ကြီး နားကြပ်ပေါက်မပါ စဉ်းစားသင့်သောအချက် – ကင်မရာကောင်းကောင်း၊ ရေစိုခံ၊ အသုံးခံ၊ performance မိုက်မိုက်တွေကို ရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဈေးအလွန်ကြီးပြီးတော့ fingerprint scanner သိပ်အလုပ်မဖြစ်ပါဘူး။ Huawei ဆိုတာက Luxury phone trend ကို ဆက်လက်တည်မြဲအောင်လုပ်ဆောင်နေတဲ့ brand အချို့ထဲမှာ တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်ပါတယ်။ စိန်ကွပ်မထား၊ Vertu လို ဈေးမများဘဲနဲ့လည်း P20 ထက်တော့ သားနားနေပါတယ်။ Porsche Design Huawei Mate RS ကတော့ Vertu လိုမျိုး […]
Posted on July 18, 2018 Author Aung Phyo Oo (Myanmar Mobile App)	Comment(0)